संविधानको सार्थकता- विचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन ३, २०७६ सम्पादकीय
नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपले हुन सकेको छैन भने समाजका सबै समुदायमाझ यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने दायित्व पनि राजनीतिक नेतृत्वका सामु बाँकी छ । शुक्रबार संविधान दिवसलाई ‘राष्ट्रिय दिवस’ का रूपमा मनाइँदै गर्दा प्रथमत: यो यथार्थ बिर्सन मिल्दैन ।
संविधानमा थुप्रै कमीकमजोरी छन्, यसको कार्यान्वयनमा समस्याहरू देखापरेका छन्, यसबीचमा कतिपय नयाँ प्राविधिक समस्यासमेत आएका छन् र यसका केही अन्तरवस्तुमाथि असन्तुष्टि यथावत् छन् । यी सबैका बाबजुद वर्तमान संविधान जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा लामो उहापोहपश्चात् लेखिएको मुलुकको पहिलो, तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील एवम् जनमुखी संविधान हो भन्नेमा द्विविधा राख्नु यथार्थपरक हुँदैन । त्यसैले सतहमा जे–जति समस्या या चुनौतीहरू देखिएका छन्, तिनको समाधान यही दस्ताबेजको दायराभित्रबाट खोजिनुपर्छ । बहसको प्रस्थानविन्दु यो हुनुपर्छ ।
वर्तमान संविधानले राज्यको पुरानो प्रणालीलाई नयाँ संरचनागत प्रबन्धबाट प्रतिस्थापित गरिसकेको छ । तहगत निर्वाचन, जननिर्वाचित निकायहरूको स्थापनालगायत अन्य थुप्रै व्यवस्था सुनिश्चित भएका छन् । तथापि संविधानको प्रभावकारिता र दिगोपन यसले संस्थागत गरेका मुख्य तीनवटा परिवर्तनहरूको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा निर्भर छ । खासगरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता परिवर्तनका मूलभूत मुद्दाका वरिपरि काला बादल मडारिँदासम्म संविधान सुरक्षित भएको मान्न सकिन्न । पछिल्ला केही घटनाक्रम हेर्दा यी तीनवटै संवैधानिक आधारस्तम्भमा देखिने र नदेखिने धेरथोर हलचल आउन थालेको महसुस हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले ‘बघिनीले आफ्नो डमरुमाथि खतरा आएको देखेपछि नसहने, झम्टिने’ प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दिँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा आउन सक्ने संकेत गरेका छन् र त्यस्तो अवस्थामा सरकार चुप लागेर नबस्नेसमेत बताएका छन् । केही दिनअघि सत्तारूढ दलकै एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘परिवर्तनविरोधीविरुद्ध अभियान छेड्न’ कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका थिए । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पनि ‘मुलुकमा प्रतिगामी चलखेल बढ्न थालेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यदि संविधान र शासन व्यवस्थामाथि कुनै खतरा छ भने त्यो कसबाट हो ? के कारणले हो ? राजनीतिक दलहरूका वक्तव्य र नेताहरूका भाषणमा यो कुराचाहिँ प्राय: कहिल्यै प्रस्ट रूपमा आउँदैन । उहिल्यै सत्ताच्युत भइसकेको एउटा अमूर्त शक्तिको हाउगुजी देखाइरहनु एउटा कुरा हो । पुरातनपन्थी प्रवृत्तिले देशलाई पछाडि फर्काउने प्रयत्न आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको पनि होला तर यदि वर्तमान संविधानमाथि कसैबाट साँच्चै खतरा छ भने त्यो यसका सञ्चालकहरूकै कार्यशैलीबाट हो । गणतन्त्र तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील शासकीय ढाँचा हो तर जनताले राजतन्त्र रहनु र गणतन्त्र हुनुबीच कुनै भेद छुट्याउन सक्ने अवस्था भएन भने अथवा अहिलेका शासकलाई हिजोका राजा–महाराजाभन्दा बढी मान्नु–ठान्नु र भोग्नुपर्ने बाध्यता भइरह्यो भने जनमत भड्किन बेर लाग्दैन । तसर्थ गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दूरगामी सुनिश्चितता मूलत: शासनसत्ताको ‘सर्विस डेलिभरी’ मा निर्भर छ । यदि आम जनताको जीवनस्तर उकासियो, दैनन्दिन समस्याहरू घटे, शासन व्यवस्था सहज भयो, आर्थिक उन्नति–प्रगतिको सम्भावना देखिन थाल्यो भने जनता आफैं संविधानको रक्षार्थ खडा हुन्छन् । देशले उल्टो बाटो लिन थाल्यो भने जो कोहीले विकल्पतर्फ सोच्न थाल्छ । मुलुकलाई यो पानीढलोबाट जोगाएर सही दिशातर्फ लैजाने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो ।
संविधानका अन्य दुई प्रमुख आधारस्तम्भमध्ये संघीयताको अभ्यास पनि अपेक्षा गरिएअनुरूप सहज ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छैन । खासगरी संघले अधिकार विकेन्द्रित गरेर तलसम्म पुर्‍याउन नचाहेको र अनेक अड्चन सिर्जना गरिरहेको गुनासो प्राय: हरेक मुख्यमन्त्रीबाट सुनिन्छ । संघीय संसद्बाट कतिपय कानुन नबनिदिँदा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको पनि छ । यसखाले प्रवृत्तिगत र प्राविधिक दुवैखाले समस्याले गर्दा संघीय अभ्यास मुलुक सुहाउँदो छैन भनेर तर्क गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूले यसको गाँठो फुकाउन जति ढिलाइ गर्छन्, संघीयता त्यति नै ‘बदनाम’ हुँदै जानेछ । यस्तै अवस्था धर्मनिरपेक्षताको हकमा पनि छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान राख्नुको अर्थ राज्य कुनै धर्मविशेषको वा धार्मिक रूपान्तरणको पक्षमा उभिएको होइन र उभिनु पनि हुँदैन भन्ने सन्देश दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र आम समुदायमाझ राम्रोसँग प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा धर्म र राज्यलाई जोडेर राजनीति गर्न खोज्ने घातक प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोज्दै छ ।
सुरुमा उल्लेख गरिएझैं वर्तमान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन एउटा पाटो हो, सर्वस्वीकार्यता अर्को । हिजो संविधान निर्माण प्रक्रियाबाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरू पनि अहिले यही संविधानमातहत मूलधारको राजनीतिमा क्रियाशील छन् । राजकीय ओहदाहरू सम्हालेका छन् । हिजो पृथकताको नारा दिने समूहसमेत दल दर्ता गरेर वैधानिक दायरामा आएको छ । तथापि संविधानका कतिपय अन्तरवस्तुप्रतिका असन्तुष्टिको अन्तिम अवतरण भइसकेको छैन । मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधनको माग छाडेका छैनन् । यस्ता मुद्दालाई कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे सबै प्रमुख दलहरू एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ताकि वर्तमान संविधानको सर्वस्वीकार्यता अरू फराकिलो होस् । प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०७:२८
अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ
संविधानले गरिदिएको राज्यसत्ता र शक्ति बाँडफाँट अभ्यासको गति प्रदेश र स्थानीय तहमा सुस्त छ ।
आश्विन ३, २०७६ राजेश मिश्र
काठमाडौँ — ०७२ को संविधानपछि देखिने राजनीतिक उपलब्धि हुन्– संघीयता, तीनै तहको निर्वाचन, तीनै तहको सरकार र तिनको स्थायित्व । तर कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताका कारण संघीयता, त्यसले दिने सेवासुविधा र अवसरबाट सर्वसाधारण वञ्चित छन् । ससानो कामका लागि गाउँका मानिस जिल्ला सदरमुकाम र काठमाडौं धाउने क्रम ज्युँका त्युँ छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मालपोत, नापी जस्ता आमनागरिकका दैनिकीसँग जोडिएका सेवासुविधाका विषय गाउँस्तरमा पुगेका छैनन् । संविधानले गरिदिएको राज्यसत्ता र शक्ति बाँडफाँट अभ्यासको गति प्रदेश र स्थानीय तहमा सुस्त छ । कारण हो– काठमाडौंकेन्द्रित सत्ताको हातमा रहेका अधिकारहरू हस्तान्तरणमा ढिलाइ । र, तल पठाइसकेका सेवासुविधाका अवसर कुनै न कुनै रूपमा आफैंसँग राख्नुपर्ने केन्द्रको मोह ।
व्यावहारिक कार्यान्वयन फितलो हुँदा आमनागरिकले संघीयताको प्रतिफल पाउन नसकेको राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक भीम सुब्बा बताउँछन् । ‘संविधानमार्फत आममानिसले आमूल परिवर्तन चाहेका थिए, त्यसअनुसार संविधान आएन तर निश्चय नै केही उपलब्धि भने हासिल भए । त्यसमा संघीयता एउटा महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘तर त्यसको कार्यान्वयनमा टालटुले नीति अख्तियार गरिँदा समस्या देखिएको हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यशक्ति बाँडफाँटको व्यवस्थित र वैज्ञानिक अभ्यास हुँदा मात्रै जनता लाभान्वित हुने हुन् ।’
७ सय ५३ स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ तर संविधानले दिएको अधिकारका सूची, त्यसको विस्तृतीकरणबाट पहिचान गरिएका ३ सय ६० कामको सम्पादनमा स्थानीय तहले चुनौती सामना गरिरहेका छन् । ती सबै सेवा स्थानीय तहबाटै पाउन अझै कति समय लाग्ने हो, यकिन छैन ।
अधिकार, स्रोत, संरचना र कर्मचारी हस्तान्तरणको रफ्तार यही रह्यो भने संविधानले दिएको अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा कति समय लाग्ने हो यकिन नहुने गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बाहिर निक्लन गाह्रो मानिरहेका नीति निर्माता र कर्मचारी छन् । यही अवस्थामा संविधानले तोकिदिएको जिम्मेवारीअनुसार सबै काम स्थानीय तहबाट हुन सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘एकल अधिकारकै विषयमा काम गर्न समस्या छ । साझा अधिकारमा झन् कठिनाइ छ । अधिकार स्थापित गराउन निरन्तर संघर्ष गर्दै छौं ।’
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, १५ शय्यासम्मका अस्पताल, स्वास्थ्यका अन्य गतिविधि, कृषि र पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । नापी, मालपोतका अधिकार पनि त्यहीं सारिएको छ तर त्यसअनुसारको स्रोत, कर्मचारी र भौतिक संरचना निर्माणको दिशामा काम हुन सकेका छैनन् । विकास र सेवासम्बन्धी अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सारिएको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालय खारेजीमा परेका थिए तर खारेजीमा परेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय यति बेला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका रूपमा, कृषि कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्रका रूपमा, पशुसेवा कार्यालय भेटनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रका रूपमा सबैतिर स्थापित गरिएका छन् ।
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘समस्या यहीँ छ ।’ काम भएको ठाउँमा स्रोत र कर्मचारी नहुने तथा अधिकार कटौती भइसकेका स्थानमा संरचना र कर्मचारी थुपारिनु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा दिइसकेपछि जिल्लामा शिक्षा इकाईको काम के ? त्यो काम त गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट हुनुपर्ने होइन ?’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको अधिकार र क्षेत्रभित्र पर्ने काममा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट दोहोरोपना ल्याउने प्रयास भइरहेका छन्, त्यो ठीक होइन ।’
स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले देशैभर रहेका स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गरी प्रदेश मातहत ३५ जिल्लामा मात्रै जनस्वास्थ्य कार्यालय राख्ने संगठन संरचना गत वर्ष साउन १ मा आयो तर ६ महिना पनि नपुग्दै मन्त्रिपरिषद्ले फेरि सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय राख्ने निर्णय गर्‍यो । प्रदेश सरकारको दबाबमा उक्त निर्णय आएको थियो ।
गत वर्ष सबै अञ्चल तथा उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रदेश मातहत पठाइएका थिए । तीमध्ये विराटनगर, राजविराज, वीरगन्ज, भरतपुर, नेपालगन्ज र डडेल्धुराका अञ्चल र उपक्षेत्रीय अस्पताल क्रमश: स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू मातहत ल्याएको छ अर्थात् केन्द्रले प्रदेश तथा प्रदेशले स्थानीय तहका अधिकारमा आँखा लगाएकै छन् । अधिकारका लागि केन्द्रसँग लडिरहेको प्रदेश सरकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयमा भने कञ्जुस्याइँ नै गरिरहेका छन् । सामान्य खालका अनुदान, बीउबिजन ससाना विकासका योजना वितरणमा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थान सुरक्षित पार्न खोज्नु केन्द्रकै पुनरावृत्ति भएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।
प्रदेशले जिल्लाजिल्लामा ज्ञान केन्द्रका नाममा कार्यालय स्थापना गरेर संविधानले नचिनेको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्यञ्जुको आरोप छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका संरचना स्थानीय तहमा हुनुपर्ने हो, त्यसको जनशक्ति र बजेट तल हुनुपर्नेमा जिल्लामा रोकिनु संविधानभन्दा बाहिरको विषय हो,’ उनले भने, ‘संघले मात्रै होइन, प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार दिन चाहेको छैन ।’
अर्कोतिर केन्द्रसँग प्रदेश सरकारका प्रशस्तै गुनासा छन् । गत पुस ३ मा संघ र प्रदेशको साझा सहमतिमा संघीयता कार्यान्वयनको २९ बुँदे कार्ययोजना बनाइयो । प्रधानमन्त्री, केन्द्र सरकारका मन्त्री तथा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी बसेर बनाएको उक्त कार्ययोजनाको लक्ष्य थियो– प्रदेश सरकारलाई छिटो गति दिने । त्यो आवश्यक कामहरूको सूची, अप्ठ्यारा फुकाउने कार्ययोजना थियो । चार महिनाको अवधि अर्थात् चैत मसान्तभित्र सबै काम सक्ने उद्देश्य थियो ।
कार्यान्वयन गर्ने निकाय, काम सक्नुपर्ने समयसीमा र अनुगमन गर्ने निकायसमेत उल्लेख गरी स्पष्ट ढंगले बनाइएको उक्त कार्ययोजनाको १० प्रतिशत काम पनि निर्धारित समयसीमाभित्र गरिएन । अहिलेसम पनि उक्त कार्ययोजनाका धेरै काम हुन नसकेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन् । ‘निर्धारित लक्ष्यमा काम भएको भए प्रदेशले धेरै गति लिइसक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘केही काम त भएका छन् तर त्यसमा केन्द्रीकृत सोच नै हाबी देखिएको छ ।’
उक्त कार्ययोजनाअनुसार संघ सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्था र विकास योजना हस्तान्तरण अझै पनि हुन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनको कार्ययोजनाअनुसार काम भएको कुनै पनि अनुभूति प्राप्त हुन नसकेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीसहितका उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नै बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन नगरिनु र त्यसअनुसार काम नहुनुले नै संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार कति उदासीन रहेको प्रस्टिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न भइरहेको कठिनाइका कारण संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर बनेको हो ।’
प्रदेश सरकारका समस्या पनि उस्तै छन् । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र केन्द्रको हस्तक्षेप छ । कानुन, स्रोत र जनशक्तिको अभावले संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यासमा ढिलाइ भएको छ । तैपनि पछिल्लो अवधिमा प्रादेशिक संरचनाको जग बसाल्ने काम भइरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘प्रदेश बिलकुलै नयाँ संरचना हो, करिब डेढ वर्षको अवधिमा भएका काम आशाजनक नै छन्,’ उनले भने, ‘धेरै उल्झन पार गर्दै अगाडि बढ्दै छौं । कति कराउनु, कति लड्नु ? अझै पनि शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने किसिमले नै संघले कानुन ल्याउँदै छन् । नकारात्मक पाटो त्यही हो ।’
संघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवाको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाइदिएपछि सबै प्रदेशमा लोकसेवा गठनको बाटो खुलेको छ । प्रदेश प्रहरीको समायोजन र मापदण्डसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेका छन् । त्यसको प्रमाणीकरणसँगै संविधानले दिएको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अभ्यास प्रदेशले थाल्नेछ तर प्रदेशको गति बढाउन अझै दर्जनौं संघीय कानुनको आवश्यकता छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परिचालनकै विषयलाई नै लिएर संघ र प्रदेशबीच टसल छ । वनजंगलसहितका प्राकृतिक स्रोत, सरकारी संरचना, योजनालगायत विषयमा तीन तहबीच सुषुप्त द्वन्द्व छ ।
विकास योजनाको वर्गीकरण र हस्तान्तरणमा भएको ढिलाइले पनि प्रभावकारी ढंगले काम देखाउन र बजेट खर्चिन प्रदेशलाई समस्या भएको गुरुङले बताए । अर्कोतिर जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय परीक्षण मूल्यांकनको अधिकार केन्द्रसँग हुँदा त्यसको झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि अर्बौंका परियोजना अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
जुनसुकै संविधानले राज्य सञ्चालनका संरचना दिने भएकाले संरचना प्राप्तिलाई मात्रै उपलब्धि मान्न नसकिने राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन् । ‘सरकार कसरी बन्छ, चुनाव कसरी हुन्छ, संरचना कस्ता हुन्छन् आदि कुरा संविधानको न्यूनतमको काम हो,’ उनले भने । संविधानले दिएका संरचना केही व्यक्तिलाई पदमा पुग्ने वैधानिक बाटोमा मात्र सीमित हुन पुगेको खनालको बुझाइ छ । ‘पदमा पुगेका मानिसमा जिम्मेवारीबोधको कमी देखिएको छ । पद निर्माण भएका छन् तर त्यसको प्रयोजन गतिहीन हुँदा जनता लाभान्वित हुने स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘संविधानले जीवन्त गति पाएको छैन । यसका संरचनाले पनि काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।’
प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०७:२७